ktmkhabar.com - मेसीको पहिलो लिग गोल !
मेसीको पहिलो लिग गोल !
बार्सिलोनाबाट यो सिजन पीएसजी पुगेका मेसीले च्याम्पियन्स लिगको तीन खेलमा तीन गोल गरेका छन् । तर फ्रान्सको शीर्ष लिगमा भने पाँचौं खेलमा पहिलो गोल हो । ‘यो र यसअघिको खेलमा मैले धेरै अवसर पाएको थिएँ,’ मेसीले भने, ‘मैले च्याम्पियन्स लिगमा यसअघि नै गोल गरिसकेको भए पनि लिगमा गोल गर्न पाउँदा खुसी छु ।’
गोलरक्षक केलर नाभारले रातो कार्ड पाए पनि पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले नेन्ट्सलाई ३–१ गोलअन्तरले पराजित गरी फ्रान्सेली लिग वानको शीर्षस्थान अझै मजबुत पारेको छ । लियोनल मेसीले पीएसजीबाट पहिलो लिग गोल गरे ।
पार्क डेस प्रिन्सेसमा केलियन एम्बाप्पेले सुरुमै गोल गरे । तर दोस्रो हाफमा गोलरक्षक नाभारले रातो कार्ड पाई पीएसजी १० खेलाडीमा सीमित भएको मौकामा रान्डोल कोलो मुयानीले नेन्ट्सका लागि बराबरी गोल फर्काए ।
१० मिनेटको समय बाँकी रहँदा डेनिस अपिहाले आत्मघाती गोल गर्न पुग्दा पीएसजीले पुनः अग्रता लियो । लगत्तै एम्बाप्पेको पासमा मेसीले गोल गरेपछि पीएसजीले १४ लिग खेलमा १२ औं जित निकाल्यो ।
पीएसजीले अर्को साता च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत म्यानचेस्टर सिटीसँग खेल्दै छ । ‘म आफ्नो पहिलो गोलबाट निकै खुसी छु । म यो चाहिरहेको थिएँ,’ मेसीले भने ।